လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအလွန်အမင်းကြိုးများနှင့်အထီးကြွက်များအတွက်အားဖြည့်ဖြစ်ပါသည် (Coolen et al ။ 2004; Pfaus et al။ 2001) ။ ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (နောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆုလာဘ်ပွောငျးလဲTenk et al။ 2009) ။ ထပ်ခါတလဲလဲမိတ်လိုက်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ (လိင်အပြုအမူ facilitated ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ် "အားဖြည့်", လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏မိတ်လိုက်နှင့်ပံ့ပိုးကူညီစတင်ရန်လျော့နည်းသွား latency ခြင်းဖြင့်သက်သေBalfour et al။ 2004; Pfaus et al။ 2001) ။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့်များ၏နောက်ခံဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မိတ်လိုက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်း Conditions တွေကိုယာယီအထီးကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ်ချက်ချင်း-အစောပိုင်းဗီဇက c-fos (၏စကားရပ်သွေးဆောင်ပြခဲ့ကြBalfour et al။ 2004; Pfaus et al။ 2001) ။ ထို့အပွငျကမကြာသေးမီက (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကယောက်ျားကိုကြွက် mesolimbic စနစ်ကြာရှည် neuroplasticity induces ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်Frohmader et al။ 2009; အိုး et al။ 2010). ထို့အပြင်ခုနှစ်, အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံΔFosBတစ်ဦးသွေးဆောင်ပြထားပြီး နျူကလီးယပ် accumbens (NAc) တွင် Fos မိသားစုဝင်, (Wallace et al။ 2008) ။ ΔFosB, FosB တစ်ခြင်းကို splice မူကွဲ, (၎င်း၏ သာ. ကြီးမြတ်တည်ငြိမ်မှုကြောင့် Fos မိသားစုတစ်မူထူးခြားတဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်Carl et al။ 2007; Ulery-Reynolds က et al။ 2008; Ulery et al။ 2006) နှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ရေရှည်အာရုံကြော plasticity ဖြန်ဖြေစွဲ၏မူးယစ်ဆေးများအတွက်မြှင့်တင်ရန်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုအခန်းကဏ္ဍ (Nestler et al။ 2001) ။ ΔFosBဇွန်ပရိုတိန်းနဲ့ heteromeric ကူးယူအချက်ရှုပ်ထွေးသော (active ပရိုတိန်း-1 (AP-1)), ဖြစ်နိုင်ရင် JunD (ဖြစ်ပေါ်လာသောChen က et al။ 1995; Hiroi et al။ 1998). အဓိကအား bi-Transgene ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီး striatum ဖို့ကန့်သတ်, Over-စကားရပ်ΔFosB၏သွေးဆောင်မှတဆင့်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲတူသောအမူအကျင့် phenotype ယခင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုတစ်ခုမရှိခြင်းရှိနေသော်လည်းထုတ်လုပ် (McClung et al။ 2004) ။ ဒီအမူအကျင့် phenotype (ကိုကင်းဖို့ထိခိုက် locomotor တုံ့ပြန်မှုများပါဝင်သည်Kelz et al။ 1999ကိုကင်းဘို့), တိုးမြှင့ preference ကို (Kelz et al။ 1999) နှင့်မော်ဖင်းအကိုက် (Zachary et al။ 2006), နှင့်တိုးမြှင့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (Colby et al။ 2003).
မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ဆင်တူ, ΔFosBသဘာဝအကြိုးအပြုအမူတွေအားဖြင့် upregulated နှင့်ဤအပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး mediates ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosB၏စကားရပ်-over ကြွက်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. ဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးတိုးပွါး (Werme et al။ 2002), စားစရာဘို့တုံ့ပြန်ဆာပ (Olausson et al။ 2006), sucrose စားသုံးမှု (Wallace et al။ 2008), နှင့်အထီးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် (Wallace et al။ 2008) နှင့်အမျိုးသမီး (Bradley et al။ 2005) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ထို့ကြောင့်ΔFosBသဘာဝအကြိုးအတွေ့အကြုံများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါ။ T ကသူကလက်ရှိလေ့လာမှုအထူး mesolimbic စနစ်နောက်ဆက်တွဲမိတ်လိုက်အပြုအမူနှင့်အာရုံကြော activation အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ရေရှည်ရလဒ်များအတွက် NAc အတွက်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဖြင့်ယခင်လေ့လာမှုများအပေါ်ချဲ့ထွင်.
Agmo အေအမျိုးသားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြွက်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res Protoc ။ 1997; 1: 203-209 ။ [PubMed]
Agmo တစ်ဦးကယင်းအထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်လွှတ်၏ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့် Berenfeld R. : opioids နှင့် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1990; 104: 177-182 ။ [PubMed]
အန်းအီး, Chen က J ကို, Zagouras P ကို, မဂ္ဂနာ H ကို, ဟော်လန် J ကို, Schaeffer အီး, Nestler EJ ။ နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens နျူကလီးယားအချက်-kappaB ၏ induction ။ J ကို Neurochem ။ 2001; 79: 221-224 ။ [PubMed]
ME Balfour, ယု L ကို, Coolen LM ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအထီးကြွက်များတွင် mesolimbic system ကိုသက်ဝင်စေ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29: 718-730 ။ [PubMed]
Bibb ဂျာ Chen က J ကို, တေလာ JR, Svenningsson P ကို, Nishi တစ်ဦးက, Snyder GL, ယန် Z ကို, Sagawa ZK, Ouimet CC ကို, Nairn AC အ, Nestler EJ, Greengard P. အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု၏အာရုံခံပရိုတိန်း Cdk5 နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ သဘာဝ။ 2001; 410: 376-380 ။ [PubMed]
Bradley KC, Haas AR, Meisel RL ။ အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက် 6-Hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (Mesocricetus auratus) အမျိုးသားများနှင့်အတူ copulatory interaction ကအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမြား၏ sensitized သက်ရောက်မှုများကိုဖျက်ပယ်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2005; 119: 224-232 ။ [PubMed]
Bradley KC, Meisel RL ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်စိတ်ကြွဆေး-နှိုးဆွ locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းက c-Fos ၏လိင်အမူအကျင့်သော induction အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအားဖြင့် sensitized နေကြသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 2123-2130 ။ [PubMed]
Chao J ကို, Nestler EJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏မော်လီကျူး neurobiology ။ Annu ဗြာ Med ။ 2004; 55: 113-132 ။ [PubMed]
Chen က J ကို, Nye သူ, Kelz ကို MB, Hiroi N ကို, Nakabeppu Y ကို, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Nestler EJ ။ electroconvulsive ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်ကင်းကုသနေဖြင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နှင့် FosB တူသောပရိုတိန်း၏စည်းမျဉ်း။ မော်လီကျူးဆေးဝါးဗေဒ။ 1995; 48: 880-889 ။ [PubMed]
Coolen LM, Allard J ကို, Truitt WA, Mckenna Ke ။ သုတ်ရည်လွှတ်ဗဟိုစည်းမျဉ်း။ Physiol ပြုမူနေ။ 2004; 83: 203-215 ။ [PubMed]
Damsma, G, Pfaus JG, Wenkstern: D, Phillips က AG က, Fibiger HC ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ဂီယာတိုးပွါး: အသစ်အဆန်းများနှင့်ရွေ့လျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1992; 106: 181-191 ။ [PubMed]
Frohmader KS, အိုး KK, Balfour ME, Coolen LM ။ အပျော်အပါးရောစပ်: လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လိင်အပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ Horm ပြုမူနေ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2009 ။
ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Hoebel BG ။ နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် hypothalamic ဆွဟာ accumbens အတွက် dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တိုးမြှင့်။ Physiol ပြုမူနေ။ 1988a; 44: 599-606 ။ [PubMed]
ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Hoebel BG ။ microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်များနှင့်ကင်းသည့်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine တိုးမြှင့်။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1988b; 42: 1705-1712 ။ [PubMed]
Hiroi N ကို, Marek GJ, Brown က JR, သငျတို့သ H ကို, Saudou က F, Vaidya VA သို့, Duman RS, Greenberg ME, Nestler EJ ။ နာတာရှည် electroconvulsive သိမ်းယူမှု၏, မော်လီကျူးဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့်လုပ်ရပ်များအတွက် fosB ဗီဇ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience ။ 1998; 18: 6952-6962 ။ [PubMed]
Hommel JD, Sears RM, Georgescu: D, Simmons DL, DiLeone RJ ။ ဗိုင်းရပ်စ်-mediated RNA ်ရောက်စွက်ဖက်ကိုအသုံးပြုပြီးဦးနှောက်အတွက်ဒေသခံဗီဇ knockdown ။ နတ် Med ။ 2003; 9: 1539-1544 ။ [PubMed]
B က, Kosofsky B, Hyman SE, Nestler EJ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်နှင့်နာတာရှည်ကင်းအားဖြင့်ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် binding က AP-1 ၏စည်းမျဉ်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1992; 89: 5764-5768 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hull က EM, Meisel RL, Sachs bd ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Horm ပြုမူနေ။ 2002; 1: 1-139 ။
Jaber M က, Cador M က, Dumartin B, Normand အီး, Stinus L ကို, Bloch ခထူးခြားသောနှင့်နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးကုသကွဲပြားခြားနားကြွက် striatal အာရုံခံအတွက် neuropeptide messenger ကိုအာအန်အေအဆင့်ဆင့်နှင့် Fos immunoreactivity ထိန်းညှိ။ neuroscience ။ 1995; 65: 1041-1050 ။ [PubMed]
Jenkins WJ, Becker က JB ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အရှိန်အဟုန်သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်း dopamine အတွက် dynamic တိုး။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003; 18: 1997-2001 ။ [PubMed]
လိုပက်ဇ်နာရီ, အမျိုးသမီးကြွက်မှ Ettenberg အေ Exposure လိင်-နုံများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအထီးကြွက်အကြားက c-fos သော induction အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်လုပ်သည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2002; 947: 57-66 ။ [PubMed]
Miller က SM, Lonstein JS ။ ကိုရွှေ့ဆိုင်ကြွက်များ၏ medial preoptic ဧရိယာမှ Dopaminergic စီမံကိန်းများ။ neuroscience ။ 2009; 159: 1384-1396 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
မော်ဂန် JI, အာရုံခံအတွက် Curran တီ stimulus-ကူးယူနားချင်းဆက်မှီ: ဆယ်လူလာချက်ချင်း-အစောပိုင်းမျိုးဗီဇ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1989; 12: 459-462 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 ပျော့ပျောင်း 1: 24-32 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ ကိုကင်းစွဲ၏ neurobiology ။ သိပ္ပံ Pract ရှုထောင့်။ 2005; 3: 4-10 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nestler EJ, Barrot M က, ကိုယ်ပိုင် DW ။ DeltaFosB: စွဲတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2001; 98: 11042-11046 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Perrotti LI, Bolanos, CA, Choi KH, Russo SJ, Edwards က S နဲ့, Ulery PG, Wallace DL, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ, Barrot အမ် DeltaFosB psychostimulant ကုသမှုပြီးနောက် ventral tegmental ဧရိယာ၏ posterior အမြီးအတွက် GABAergic ဆဲလ်လူဦးရေအတွက်စုဆောင်း။ EUR J ကို neuroscience ။ 2005; 21: 2817-2824 ။ [PubMed]
Pfaus JG ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏လမ်းကြောင်း။ J ကိုလိင် Med ။ 2009; 6: 1506-1533 ။ [PubMed]
Pfaus JG, Kippin TE, Centeno အက်စ်အခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Horm ပြုမူနေ။ 2001; 40: 291-321 ။ [PubMed]
Phillips က AG က, Vacca, G, Ahn အက်စ် dopamine, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်တစ်ဦးကထိပ်တန်း-Down ရှုထောင့်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008; 90: 236-249 ။ [PubMed]
Renthal W က, Carl TL, ဝင်္ငါ Covington သူ, 3rd, Truong HT, Alibhai ငါ Kumar ကတစ်ဦး, Montgomery RL, Olson မာခ်, Nestler EJ ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်က c-fos ဗီဇ၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု desensitization mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 7344-7349 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Renthal W က, Kumar ကတစ်ဦး, Xiao, G, Wilkinson က M, Covington သူ, 3rd, ဝင်္ငါ Sikder: D, Robison AJ, LaPlant မေး, Dietz DM, Russo SJ, Vialou V ကို, Chakravarty S က, Kodadek တီဂျေ, Stack တစ်ဦးက, Kabbaj M က, Nestler EJ ။ ကိုကင်းများက chromatin စည်းမျဉ်းများ၏မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ sirtuins များအတွက်အခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009; 62: 335-348 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tenk CM, Wilson က H ကို, Zhang ကမေး, အိုး KK, Coolen LM ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်: သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် intromissions နှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများ။ Horm ပြုမူနေ။ 2009; 55: 93-97 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wallace DL, Vialou V ကို, Rios L ကို, Carl-Florence TL, Chakravarty S က, Kumar ကတစ်ဦး, ဂရေဟမ် DL, အစိမ်းရောင်က TA, Kirk ကတစ်ဦး, Iniguez SD, Perrotti LI, Barrot M က, DiLeone RJ, Nestler EJ, Bolanos-Guzman CA. နျူကလီးယပ်အတွက် DeltaFosB ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကသဘာဝဆုလာဘ်-related အပြုအမူအပေါ် accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 10272-10277 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]